Iphrofayela Yenkampani - China Daxin Machinery Co., Ltd
Isetshenziswa Injection Plastic Molding Machine: amayunithi kuka-200 in isitokwe
Isetshenziswa umjovo plastic ukubumba umshini
I-DAXIN MACHINERY inikeza isisombululo esisodwa, okubandakanya ukuthengisa imishini yemishini, ukuqaqa imishini, ukulayishwa kwe-intocontainer, ukusula ngokwezifiso, ukuthunyelwa, nokufaka nokufaka imishini. IDaxin ibuye inikeze ukwesekwa ngemuva kokudayiswa: ukulungisa izingxenye zomshini noma amabhodi e-PLC, ukuthenga izingxenye ezisele (ezisetshenzisiwe noma ezintsha), futhi nokuthumela uchwepheshe wethu emshinini wamakhasimende we-testervice
Core Ibhizinisi: esetshenziswa Injection Molding Machine
Yonke imishini yomshini isilungisiwe yahlinzekwa futhi yahlolwa ngaphandle kokukhubazeka. Yonke imishini inganikezwa amandla okuqhutshwa ukuhlolwa ngaphansi kophahla olulodwa endlini yethu yokugcina impahla.
Yaqalwa ngonyaka we-1986, iDaxin Imishini yokuthenga imishini esetshenzisiwe (imishini esetshenzisiwe ye-Injection Molding, imishini yamathuluzi nemishini yokusiza) evela kuyo yonke indawo emhlabeni futhi igcinwe endaweni yethu yokugcina impahla eyi-10000 sqm eDongguan, eChina (eduze kwaseHongkong naseGuanzhou)
Kunamayunithi angaphezu kwama-200 asesitokweni nganoma yisiphi isikhathi, aqukethe izinhlobo eziningi ezahlukahlukene ezivela eJapan, Korea, Europe, Taiwan, Hongkong naseChina.
IDaxin Imishini ibizinze eDongguan iminyaka engaphezu kwengu-30, inolwazi olunothile nedumela elihle, sandise ibhizinisi lethu emhlabeni jikelele emazweni angaphezu kwama-40 asuka e-Asia, South East Asia, Middle East, Afria, South / North America, Austrlia, IYurophu.
Nikeza imishini enhlobonhlobo ukuze ivumelane nezidingo zamakhasimende onke ngekhwalithi ephezulu nangentengo yokuncintisana!